Argentina Wholesale & B2B - Communal News: Online Business, Wholesale & B2B Marketplace News
श्रेणी: अर्जेन्टिना थोक र B2B
अर्जेन्टिना पसल द ग्लोब
UNCTAD - ग्लोबल एफडीआई प्लम्मेट्स
जनवरी 25, 2021 जनवरी 25, 2021 भिन्सेन्ट फर्डिनान्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
विदेशी प्रत्यक्ष लगानी, COVID-19 महामारी बाट प्रभावित, २०२० मा विश्वव्यापी %२% गिरायो, संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यापार र विकास को सम्मेलन (UNCTAD) आइतबार भन्यो। UNCTAD ले संकेत गरे कि यस सूचकबाट रिकभरी सम्भवतः २०२२ सम्म ढिलाइ हुनेछ।
कोरोनाभाइरस - रूसको खोप अर्जेन्टिनामा दर्ता भयो
अर्जेन्टिना दक्षिण अमेरिका मा रूसी निर्मित Sputnik V खोप दर्ता गर्ने पहिलो राष्ट्र हो। यो नोट गर्नु पर्छ कि अगस्त ११ मा, स्पुतनिक V ले रूसी संघको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्‍यो, विश्वको पहिलो दर्ता कोरोनाभायरस भ्याक्सिन बन्ने।
कोरोनाभाइरस - उरुग्वेदेखि सिल, मिलिटराइज बोर्डरहरू
डिसेम्बर 22, 2020 डिसेम्बर 22, 2020 भिन्सेन्ट फर्डिनान्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
उरुग्वेले आगामी २० दिनको लागि यसको जमिन, समुद्र, नदी, र वायु सिमानाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेछ र कोरोनाभाइरस महामारीको फैलावट रोक्नको लागि ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको साथ यसको सिमानामा सेनाहरू पठाउनुहोस्। चाल सोमबार देखि प्रभावकारी छ, र कम्तिमा जनवरी १० सम्म चलेको छ। लक्ष्य हो क्रिसमस र नयाँ वर्षको उत्सवको समयमा संक्रामक रोकथामको।
द लाइफ अफ सोकर लेजेन्ड, डिएगो माराडोना एक झलकमा
डिसेम्बर 4, 2020 डिसेम्बर 3, 2020 मिगुएल टोरनेर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
फुटबलको बारेमा कुरा गर्नु र पिचलाई अनुग्रह दिनको लागि सब भन्दा राम्रो मध्ये एकको पनि उल्लेख नगर्नु भनेको खेललाई पूर्ण अन्याय हुनेछ। प्रख्यात फुटबल खेलाडी जो यस लेखको लागि प्रसिद्ध हुन्छन् कुनै परिचय चाहिन्छ। पिचमा र बाहिर उसको असंख्य उपलब्धिहरू उसको महानताको बारेमा आवाजहरू बोल्दछन्। डिएगो अर्मार्मो माराडोना, एउटा नाम जुन प्रत्येक फुटबल प्रशंसकहरूले खेलको समर्थन र खुशीको बेला उनीहरूको जीवनको कुनै न कुनै समयमा सुनेको हुनुपर्छ।
जन्म र प्रारम्भिक वर्षहरू
डिएगो 30 मा जन्म भएको थियोth अक्टूबर १ 1960 .०, अर्जेन्टिनाको ब्यूनस आयर्स प्रान्तको राजधानी लानसमा। उसको बाल्यावस्था कडा थियो किनकि उनी एक कम आय परिवारमा जन्मेका थिए जुन अर्को जन्मबाट अर्कै प्रान्तमा बसाई सरेका थिए।
जब म्याराडोना केवल १० बर्षको थियो, उनले अर्जेन्टिनास जुननिअर्स क्लबमा उनका साथी गोयो कार्रिजो, भिला फियोरिटोको साथीको साथ प्रयास गर्ने निर्णय गरे। स्रोत: @ डिएगोओफिसियल_०
हुर्कदै गर्दा, म्याराडोनाले फुटबलमा गहिरो चासो विकास ग .्यो, हुनसक्छ यो एकमात्र खेल हो र यसको वरपरको कदर गरियो। उसले बललाई छुने बित्तिकै फुटबलसँग प्रेम गर्न थाल्यो। यो उसको वरिपरिको प्रभावको कारण पनि हुन सक्छ किनकि त्यस क्षेत्रमा सबैजना खेललाई धेरै मन पराउँथे।
चाहे उसको वरपरको प्रभाव वा खेलको लागि उसको आफ्नै उत्कटताका कारण, डिएगोले चाँडै नै राम्रो सभ्य फुटबल कौशल विकास गरे र बलमा कुरा गरे जब उनी यसमा थिए। उसको खेलको विकासले उनलाई स्थानीय क्लबहरूको स्काउट्सबाट धेरै ध्यान दियो। यसले क्षेत्रीय एकेडेमीको डगआउटमा केही भौहें उठायो।
यो सबै सुरु भएको छ जब एक प्रतिभा स्काउट माराडोनाको प्रतिभा देखा जब उनी आफ्नो स्थानीय आसपासको क्लब, एस्ट्रेला रोजाका लागि खेलिरहेका थिए। त्यसपछि उनलाई लस सेबोलिटस, अर्जेन्टिनास जुनियरको जुनियर एकेडेमीले बल बालकको रूपमा स्वीकार्यो। उनीहरूको खेलको बखत, उहाँ आफ्नो बलिंग ट्रिक्सको साथ दर्शकहरूलाई खुशी पार्नुहुन्थ्यो जब दुवै टोली आधा समयमा पिचबाट बाहिर थिए।
उसको प्रोफेशनल फुटबल क्यारियर शुरू गर्नुहोस्
त्यतिखेर, उहाँ बाह्र वर्षका हुनुहुन्थ्यो र धेरै कनिष्ठ एकेडेमी र स्थानीय क्लबहरूको स्काउट्सको आँखामा पहिले नै थियो। डिएगोको प्रतिभाले उनलाई कहिले लाईमलाइटबाट टाढा हुन दिएन। उहाँ जहाँ जानुहुन्छ, उहाँ सबैको ध्यान बुझ्नुहुन्थ्यो जो खेलमा सबैभन्दा सानो प्रेम पनि थियो।
माराडोनाले आफ्नो पेशेवर फुटबॉल डेब्यू अर्जेन्टिनोस जूनियरको लागि सोह्र वर्षको उमेरमा गर्‍यो। '76 को गिरावटमा, संसारले देख्यो एल पिब डे ओरो (गोल्डेन केटा), खेलिरहेको बुटहरूमा पिचमा चम्किरहेको। जब उसले बल छोयो, पंडितहरूलाई थाहा थियो कि केटाले युगको परिभाषा गर्न लागिरहेको छ, र उसको नाम विश्वभरिका सबै प्रसिद्ध कोलोसेममा प्रतिध्वनि हुनेछ।
उसको पहिलो खेल टलेरेस डि कॉर्डोबाको बिरूद्ध थियो, जसमा उसले गोल नबारी पनि खेलमा राम्रो प्रभाव पारेको थियो। माराडोनाको पहिलो गोल उनको पहिलो खेलको केहि हप्ता पछि आयो जब उनले सान लोरेन्जो बिरुद्द एक स्क्रिमर बनाए र स्कोर पानामा आफ्नो नाम पाए।
डिएगोले आफ्नो पहिलो क्लबको लागि एक सय साठीत्तर खेल खेले र एक सय पन्ध्र गोल गरे। यो संख्या आफ्नो उमेरका खेलाडीका लागि एकदम राम्रो थियो, त्यसैले किन उसले प्रसिद्धिको भर्या। भन्दा चाँडो सारे।
एक ठूलो क्षेत्र प्रवेश गर्दै
अर्जेन्टिनोस जुनियर्ससँग केही अद्भुत प्रदर्शनहरू गरेपछि, माराडोनाको ठूलो क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन बाँकी थियो। केहि तुलनात्मक रूपमा ठूला क्लबहरूको रडार अन्तर्गत, माराडोना हस्तान्तरण को सम्भावना छलफल गर्न बोका जूनियर्स द्वारा सम्पर्क गरिएको थियो। यसलाई ठूलो अवसरको रूपमा हेर्दै उसले जानाजानी प्रस्ताव स्वीकार्यो। उनले 81१ को वसन्त million० लाख अमेरिकी डलरको ट्रान्सफर शुल्कमा स्टेट क्लबका लागि हस्ताक्षर गरे।
स्थानीय प्रतिद्वन्द्वी क्लब रिवर प्लेटले सम्पर्क गरेको भए पनि, जसले उसलाई क्लबको सबैभन्दा धेरै तलब पाल्ने खेलाडीको पद प्रदान गर्‍यो, डिएगो आफ्नो बाल्यकालको सपना अनुसार बोका जुनियरमा गए। बोका जुनियर्सका चुनौतीहरू ठूला थिए किनकि उनको जीवनको अर्को चरणले उहाँबाट अधिक माग गर्‍यो। उसले चाँडै बोका जुनियर्समा सफलताको भर्या .मा चढ्यो। उनले आफ्नो नामको लागि धेरै गोलहरू दर्ता गरे, जुन मध्ये पहिलो क्लबको लागि पहिलो टेलेरेस डे कॉर्डोबाको बिरूद्ध आयो, जहाँ उसले twice-१ गोलमा दुई गोल गरे।
त्यहाँ सधैं बोका जुनियर्स र नदी प्लेट बीच एक कडा स्थानीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो। उनीहरूको खेल भनेर चिनिन्थ्यो सुपरक्लासिको। डिएगोले आफ्नो पहिलो सुपरक्लासिकोमा आफ्नो लक्ष्यमा एक गोल थप्यो जसले उसको क्लबलाई उसको प्रतिद्वन्द्विरूद्ध 3-१ ले आरामदायी जीत दिलायो।
त्यसपछि १ 1982 7.6२ को वर्ल्डकप आयो। माराडोनाले आफ्नो देशको लागि प्राय जसो खेलहरूमा खेल्थ्यो र फाइनलमा नबनाई टूर्नामेन्टमा उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शन गर्‍यो। टूर्नामेन्ट पछि, एफसी बार्सिलोना अचम्मको केटा नजिक गए र उनलाई .XNUMX लाख अमेरिकी डलरमा हस्ताक्षर गर्‍यो। यो त्यस समयको रेकर्ड स्थानान्तरण हो, त्यस समयमा कुनै पनि खेलाडीलाई त्यति मूल्य दिइएको थिएन।
बार्सिलोनामा माराडोनाको समय उनीको लागि त्यति रमाइलो थिएन, यद्यपि उनले छत्तीस उपस्थितमा २ twenty पटक नेटको पछाडि हिर्काए। बार्सिलोनाका दिनहरूमा, डिएगो केही घाइते भए र विवादास्पद अन-पिच घटनाहरूको सिकार भए जसले गर्दा उनी अर्कै ठाउँमा सर्न थाले। स्थितिलाई राजधानी बनाउँदै प्रख्यात इटालियन क्लब नेपोलिले सुनको अवसर देखे र दोस्रो पटकको विश्व रेकर्ड १०. transfer10.48 मिलियन अमेरिकी डलरको लागि हस्ताक्षर गरे।
नापोलीमा उनको समय
5 माth जुलाई १ 1984।।, माराडोनाले ap sevent हजार नापोली प्रशंसकहरूको अगाडि बलमा जग बसाए, पहिलो पटक आफुलाई नेपोली खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत गरे। धेरै नेपोली प्रशंसकहरूले उनलाई एक उद्धारकर्ताको उपाधि दिए, र उनले उनीहरूको प्रदर्शनमार्फत उनीहरूलाई सही प्रमाणित गरे। नापालीमा माराडोनाको कार्यकाल कुनै पनि क्लबका लागि सबैभन्दा लामो थियो। उनले क्लबको लागि लगातार आठ सत्रहरू खेले र त्यस समयमा आफ्ना सबै ठूला प्रशंशा कमाए।
म्याराडोना उनीहरूसँग खेलेसम्म नेपोलीले लिगमा प्रभुत्व जमाए। जुभेन्टस, एसी मिलान, इन्टर्नाजिओनाल जस्ता केही उत्कृष्ट क्लबहरू भए पनि, यो नेपोलि थियो जसले Italianतु '-'-'86 for का लागि इटालियन सेरी एको ठूलो चरणमा विजयी भयो। माराडोनाले लामो समयसम्म नेपोलिको कप्तान बनाए र क्लबलाई आफ्नो प्रदर्शनको उत्कृष्ट युगमा लग्यो।
अन्य क्लबहरूसँग उनको सम्बद्धतामा सेभिल्ला, नेवेलको ओल्ड ब्वायज र बोका जूनियर्समा उनको समय सामेल छ। यद्यपि यी मध्ये धेरैजसो सम्बन्ध एक सीजन भन्दा बढीको लागि टिकेन। तसर्थ, नेपोलिमा उनको समय आफ्नो खेलको अवधिमा सबैभन्दा उल्लेखनीय बनायो।
'मूर्ति' - म्याराडोनाको एउटा शीर्षक हो
माराडोनालाई अक्सर उनका अनुयायीहरूले 'D10S' भनेर बोलाउँथे, जसले शाब्दिक रूपमा परमेश्वरमा अनुवाद गर्दछ। उनका प्रशंसकहरूले उनलाई डायस, भगवान, वा आइडलको उपाधि दिएका थिए किनभने उनको अमानवीय खेल शैली र केहि चालहरू जुन उसले केवल पिचमा पुर्याउन सक्छ। यद्यपि यी पदवीहरूको कारण उसको बिरूद्ध बहस भयो र धेरै इसाईहरू बीच कडा मनपर्दैन। यो कडा मनपर्दो कारण को कारण बाइबल पहिलो आज्ञा मा भन्छन्: "म भन्दा पहिले तिम्रा तिम्रा देवताहरु हुनेछन्" (प्रस्थान २०:))। यसको मतलब के हो? हामीले डर, प्रेम, र सबै कुरामा परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्दछ। यस आज्ञाका अनुसार त्यहाँ एक मात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ, र प्रत्येक इसाईले उनी र उनका शिक्षाहरूको पालन गर्नुपर्छ।
समय बित्दै जाँदा म्याराडोनाको प्रखान तीव्र हुँदै गयो र गुटको रूप लिन थाल्यो। कुरा हातबाट बाहिर गयो जब उसका फ्यानहरूले विश्वव्यापी रूपमा यसलाई पूर्ण रूपमा गुमाए र उहाँप्रति तिनीहरूको प्रेममा सीमा भन्दा पर गयो। इग्लेसिया माराडोनिना, वा सजिलो माराडोनियन गिर्जाघर, Ros० मा माराडोनाका तीन ठूला फ्यानहरू द्वारा ario० मा फेला परेको धर्म थियोth अक्टोबर १ 1998 38 Die (डिएगोको XNUMX XNUMX)th जन्मदिन)।
इसाईमतका शिक्षा अनुसार कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण विश्वास त्रिएक ईश्वरमा राख्नुपर्दछ र उहाँमा मात्र विश्वास गर्नुपर्दछ। कुनै व्यक्तिले उनीहरूको तारालाई कति माया गर्दछ वा उनीहरूको प्रशंसा गर्दछ, उनीहरूले उनीहरूलाई मूर्तिपूजा गर्नुहुन्न। यद्यपि धेरै अनुयायीहरू इग्लेसिया माराडोनिनएउटा दाबी गर्‍यो कि उनीहरूको विवेकपूर्ण धर्म ईसाई धर्म हो र अर्को धर्म भनेको उनीहरूको चाहनाको एक रूप हो, इसाईहरूले यस कार्यको निन्दा गरिरह्यो।
लागू पदार्थ दुर्वेसनि
माराडोना ड्रग्स दुर्व्यसनको लागि प्रसिद्ध थियो। ऊ अक्सर आफ्नो क्लबको फिजियो संग सत्र मा आफ्नो खराब आहार योजनाहरु, लागूपदार्थको दुर्व्यसन, र चरम जीवनशैली पच बन्द गर्न को लागी छलफल गर्न। उनीसँग ड्रग्स र मदिरा सेवनको अवैध प्रयोगका कारण प्रायः व्यक्तिगत मुद्दाहरू थिए जसले उसलाई प्रशिक्षण सत्रबाट टाढा राख्यो। उसको खेलको पेसाप्रति उसको अलिकता लापरवाह मनोभावको कारण पनि यही कारण थियो, जसको लागि मिडियाले उनलाई प्राय: भरोसा गर्थ्यो।
फिराल कास्त्रो, सुकरात, चाभेज र चे गुएवरासँग फुटबल खेल खेल्न माराडोनाको कार्टुन स्वर्गमा भेला भइरहेको छ। स्रोत: LATUF
राजनीतिक सम्बद्धता र प्राथमिकताहरू
डिएगो वामपन्थी राजनीतिको कट्टर समर्थक थिए। जब इजरायल Palestinian प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको बारेमा सोधेको थियो, उनले स्पष्ट रूपमा पूर्व-अवस्थित प्यालेस्टाइन राज्यको इजरायलमा क्रमिक रूपान्तरणको निन्दा गरे। २०१ 2014 को गाजा युद्धमा इजरायलले गाजा पट्टीमा बम विष्फोट गर्नु आतंकवादको शर्मनाक कार्य हो भनेर उनले बुझेका थिए। डिएगोले फिडेल क्यास्ट्रो (प्रसिद्ध क्युबाली नेता) सँग कडा परिचित हुन थाल्यो। उसले आफ्नो साथी अर्जेन्टिनी चे गुएवाराको चित्रलाई दाहिने हातमा टैटू गरे।
आफ्नो राजनीतिक विश्वास र प्राथमिकताहरूलाई विचार गर्दा, डिएगो तर्कसंगत व्यक्तिजस्तो देखिन्थ्यो जसले सही कुरालाई समर्थन गरे र गलतको निन्दा गरे। यद्यपि धेरै व्यक्ति र विश्व नेताहरूले उनी राजनीतिमा उनको प्रगतिवादको लागि आलोचना गर्छन्। उसको राजनीतिक प्राथमिकता जस्तोसुकै भए पनि, महान सत्य यो हो कि सबै राजनीतिक प्रणालीहरू पापी मानवहरू मिलेर बनेको हुन्छ र यसैले ती सबै भ्रष्ट भएका छन् त्यसैले त्रुटिपूर्ण छन्।
माराडोनाको मृत्यु र श्रद्धांजलि
डिएगोको भर्खरैको निधनमा सब भन्दा ठूलो श्रद्धांजलि अर्जेन्टिना फुटबल संघ - एएफएबाट आएको थियो जसले उनीहरूको महान फुटबल खेलाडी र राष्ट्रिय नायकको दुखद प्रस्थानमा गहिरो संवेदना व्यक्त गरे। "तपाईं सँधै हाम्रो हृदयमा रहनुहुनेछ" भन्ने सम्बन्धमा पछिल्ला स्थानीय मिडिया प्रेस विज्ञप्ति अनुसार संघको टिप्पणीहरू थिए। यसबाहेक, अर्जेन्टिनीका राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नाडीजले तीन दिनको लागि राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरे र एएफएले अर्जेन्टिना च्याम्पियनशिपको प्रत्येक खेलमा किकऑफ अघि एक मिनेट मौन सुझाव दियो।
नेपल्सको सान पाओलाको स्टेडियम माराडोनाको निधनको रात उज्यालो भयो, ठूलो भीडले उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न भेला भएको थियो। नेपोली फुटबल क्लब मालिकले आफ्नो स्टेडियमको नाम परिवर्तन गर्न मिल्दोजुल्दो श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरे।
अर्जेन्टिना झण्डा र बोका जुनियर्स र अर्जेन्टिना नेश्नल टीम जर्सीको साथ माराडोनाको ताबिन।
उसको लत र आफ्नो लत र सांसारिक चाहनाहरु विरुद्ध लडाई
'हाम्रो विश्वको विकास गर्ने' अभियानको रूपमा, माराडोनाले पनि लत र सांसारिक चाहनाहरू विरुद्ध लडाई लडे र त्यस्ता चीजहरूलाई धार्मिक मार्गबाट ​​बाधा पुर्‍यायो। एक लत एक रोग हो कि मानिस सधैं आध्यात्मिक र भौतिक गरीबी को एक राज्य मा राख्छ। हामी विश्वास गर्दछौं कि समग्र समुदायको विकास यसको लागि औषधी हो।
डिएगो जस्तै, विश्वव्यापी लाखौं मानिसहरू अझै पनि निको हुन आध्यात्मिक, शारीरिक र शारीरिक प्रयास गरिरहेका छन्। हाम्रो विश्वको विकास गर्दै मानिसहरूलाई सिकाउनु हो कि मूर्तिपूजा आध्यात्मिक गरीबी हो। मानवले सामूहिक रूपमा कुनै खास सार्वजनिक व्यक्तित्व वा चीजहरूको मोहमा आफूलाई त्यस हदसम्म बेवास्ता गर्नुपर्दछ जहाँ तिनीहरूले आफ्ना आधारभूत इसाई शिक्षाहरू भुल्न थाल्छन्। हामी येशूका शिक्षाहरू पछ्याएर र अरूहरूलाई सञ्चार गरेर इसाईमतको वास्तविक सारलाई जीवित राख्ने काम गर्दछौं।
यस संस्थाका गतिविधिहरू गरीबी निवारणमा समग्र समुदाय विकासको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रित छन्, जुन भौतिक वञ्चितता मात्र नभई आध्यात्मिक अभावलाई पनि लड्ने कुरामा केन्द्रित छ। यस मिसनमा चर्चको मौलिक भूमिका छ भने, यो तपाईं जस्तो व्यक्तिहरूले यसलाई बुझ्नु र पृथ्वीमा ईश्वरको समग्र अभियानलाई बढावा दिनको लागि प्राथमिक एजेंट बन्नु हो। आज तपाईंको समर्थन देखाउन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
बिडेन महामारी, सुरक्षा मा विश्व नेताहरु संग बोल्छ
डिसेम्बर 1, 2020 डिसेम्बर 1, 2020 भिन्सेन्ट फर्डिनान्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन यस सोमबार संग कुरा गरे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, साथै अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नाडीज, कोस्टा रिकाका कार्लोस अल्वाराडो र केन्याका उहुरु केन्याट्टासँग। श्री बिडेनले चार नेताहरुलाई चुनावी जीतका लागि बधाई दिनुभएकोमा धन्यवाद दिए।
लाखौंले माराडोनालाई शोक गरे, नयाँ उच्चमा तेलको मूल्य
नोभेम्बर 26, 2020 नोभेम्बर 26, 2020 बेनेडिक्ट कासिगारा	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अर्जेन्टिनाका सरकारी अधिकारीहरूले अपेक्षा गरे पौराणिक फुटबलर डिएगो माराडोनालाई बिदाइ दिन दस लाख भन्दा बढी मानिसहरूलेThursday० बर्षको उमेरमा हार्ट अट्याकको कारण बिहिवारको मृत्यु भयो। मानिस उनीहरूको मनपर्ने फुटबलरलाई बिदाइ गर्न आए, अपेक्षा गरेभन्दा बढी। अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति नेस्टर किर्चनरको मृत्यु पछि लगभग १० बर्ष पहिले यस्तो भव्य समारोह आयोजना गरिएको थियो।
बोलिभिया- आइतवार देशले ताजा सामान्य चुनावहरू लिने क्रममा यो सबै प्रणालीहरू छ
अक्टोबर 17, 2020 अक्टोबर 17, 2020 भिन्सेन्ट फर्डिनान्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
बोलिभियाको २०२१/२2021 समयावधिका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सिनेट र प्रतिनिधिहरू छनौट गर्न नयाँ निर्वाचन छ यो आइतवारको लागि निर्धारित एक पटकको लागि, देशको राजनीतिक इतिहासको दशकहरूमा, देशको राजनीतिक दृश्यको एक प्रमुख राजनीतिक खेलाडी, पूर्व राष्ट्रपति प्रमुख इभो मोरालेस प्रत्यक्ष सहभागी हुने छैन किनकि उनी गत वर्ष नोभेम्बरमा पद छोडेपछि अर्जेन्टिनामा निर्वासित भएका थिए। ।
अर्जेन्टिना प्रोफेस्ट पांडेमिक लक, भ्रष्टाचार
अगस्ट 18, 2020 अगस्ट 18, 2020 भिन्सेन्ट फर्डिनान्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
भारी प्रदर्शन सोमबार अर्जेन्टिनाका विभिन्न भागमा साक्षीहरू थिए जब आम जनता अल्बर्टो फर्नाडीजको नेतृत्वको प्रशासनको विरोधमा सडकमा उत्रिए। कोरोनाभाइरस महामारीको बिरूद्ध संगरोधको अवधिमा तेस्रो प्रदर्शनहरू थिए।
के तपाईले अनलाइन बुटिक कपडा स्टोरमा हेर्नु पर्छ
अगस्ट 1, 2020 जुलाई 31, 2020 सिल्भिया जेम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
फेसनको लोकप्रियता कहिल्यै लुप्त हुँदैन। हरेक वर्ष, फेसनल कपडा, झोला, जुत्ता, र सामान स्टोरहरूको एक नयाँ प्रवृत्ति प्रदर्शित हुन्छ। यद्यपि, त्यहाँ समयहरू छन् जब मल्लको वरिपरि हिंड्ने पोसाक खोज्दै थकाइलाग्दो हुनेछ। कहिलेकाँही मल्ल मानिससँग भीडभाड गर्न सक्दछन्, र तपाईले के चाहानुहुन्छ भुक्तान गर्न तपाईले लामो लाइनमा कुर्नु पर्छ। यदि तपाईं हतारमा हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि मुद्दा हुन सक्छ। एक अनलाइन बुटिक लुगा स्टोर ती व्यक्तिहरूका लागि उत्तम हुन्छन् जसमा धैर्य र समय छैन मलमा हिट गर्न र उनीहरूले चाहेको पोशाक खोज्न।